Ubunlog dia tetikasa natokana hanaparitahana sy hampahafantarana momba ny vaovao lehibe, fampianarana, tetika ary rindrambaiko azontsika ampiasaina amin'ny fizarana Ubuntu, amin'ny tsiro rehetra, izany hoe ny birao sy ny fizarana azo avy amin'ny Ubuntu toy ny Linux Mint.
Ao anatin'ny fanolorantenantsika ny tontolon'ny Linux sy ny lozisialy Free, Ubunlog dia mpiara-miasa amin'i openexpo (2017 sy 2018) ary ny Freewith 2018 ireo hetsika roa manan-danja indrindra amin'ny sehatra any Espana.
Ny ekipan'i Ubunlog dia tonian-dahatsoratra manam-pahaizana amin'ny Ubuntu, Linux, tambajotra ary rindrambaiko maimaimpoana. Raha te ho anisan'ny ekipa koa ianao dia afaka andefaso aminay ity takelaka ity mba ho tonga mpanonta.
Tiavo amin'ny teknolojia vaovao, gamer ary linuxero ao am-po vonona hanohana any amin'izay azony atao. Mpampiasa Ubuntu hatramin'ny 2009 (karmic koala), ity no fizarana Linux voalohany nihaona tamiko ary nanatontosa dia mahafinaritra aho ho an'ny tontolon'ny loharano misokatra. Miaraka amin'ny Ubuntu dia efa nianatra zavatra betsaka aho ary iray amin'ireo fototra nifidianana ny fitiavako ny tontolon'ny fampandrosoana lozisialy.
Tia ny karazana teknolojia sy mpampiasa ny karazana rafitra fiasa rehetra. Tahaka ny maro dia nanomboka tamin'ny Windows aho, saingy tsy dia tiako loatra izany. Ny fotoana voalohany nampiasako ny Ubuntu dia tamin'ny 2006 ary nanomboka teo dia nanana solosaina iray farafahakeliny fampiasa ny rafitra fiasan'ny Canonical aho. Tadidiko tamim-pitiavana rehefa nametraka Ubuntu Netbook Edition tamin'ny solosaina finday 10.1 santimetatra aho ary mankafy ny Ubuntu MATE ao amin'ny Raspberry Pi ahy, izay manandrana rafitra hafa toa an'i Manjaro ARM koa. Amin'izao fotoana izao, ny solosainako lehibe dia nametraka Kubuntu, izay, raha ny hevitro, dia manambatra ny tsara indrindra amin'ny KDE sy ny tsara indrindra amin'ny fototra Ubuntu ao amin'ilay rafitra fiasa mitovy.
Fond amin'ny programa sy rindrambaiko. Nanomboka nanandrana ny Ubuntu tamin'ny taona 2004 (Warty Warthog) aho, nametraka azy tao anaty solosaina nofidiko sy nitaingenako tamin'ny fotony hazo. Nanomboka teo ary taorian'ny fanandramako fizarana Gnu / Linux samihafa (Fedora, Debian ary Suse) nandritra ny naha-mpianatra fandaharana ahy dia nijanona tao amin'ny Ubuntu aho hampiasaina isan'andro, indrindra noho ny fahatsorany. Endri-javatra izay asongadiko foana rehefa misy manontany ahy ny fizarana hampiasaina hanombohana amin'ny tontolon'ny Gnu / Linux? Na dia hevitra manokana fotsiny aza ity ...
Tena tiako ny teknolojia ary tiako ny mianatra sy mizara fahalalana momba ny rafitra fikirakirana ny solosaina sy ny maritrano. Nanomboka tamin'ny SUSE Linux 9.1 aho niaraka tamin'ny KDE ho tontolon'ny birao. Nanomboka tamin'izay dia tiako be ny momba ity rafitra miasa ity, mitarika ahy hianatra sy hanontany bebe kokoa momba an'ity sehatra ity. Aorian'izany dia nandalina lalina kokoa an'ity rafitra fiasa ity aho, natambatra izany tamin'ny olan'ny rafitry ny informatika sy ny fanapahana. Izany dia nitarika ahy hamorona taranja vitsivitsy hanomanana ny mpianatro amin'ny mari-pankasitrahana LPIC, ankoatry ny hafa.
Mpahay tantara sy mpahay siansa amin'ny informatika. Ny tanjoko ankehitriny dia ny hampihavana ireo tontolo roa ireo amin'ny andro iainako. Tena tiako ny tontolon'ny GNU / Linux, ary indrindra indrindra ny Ubuntu. Tiako ny manandrana ireo fizarana samihafa izay mifototra amin'ity rafitra fiasa lehibe ity, noho izany dia malalaka amin'ny fanontaniana rehetra anananao aho.
Mpankafy rindrambaiko maimaimpoana malalaka sy misokatra, tsy misy mikasika faran'izay mahery. Tsy nampiasa solosaina izay tsy Linux ny rafi-piasan-dry zareo ary tsy ny KDE ny tontolon'ny birao mandritra ny taona maro, na dia mijery ireo fomba hafa isafidianana aza aho. Azonao atao ny mifandray amiko amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny fco.ubunlog (ao) gmail.com
Mpianatra injeniera momba ny solosaina ao amin'ny Oniversiten'ireo Nosy Balearic, tia rindrambaiko malalaka amin'ny ankapobeny ary Ubuntu manokana. Efa ela aho no nampiasa an'ity rafitra miasa ity, hany ka ampiasaiko isan'andro isan'andro mba hianarana sy hananako fotoana fialamboly.
Computer Engineer, mpankafy Linux aho, fandaharana, tamba-jotra ary izay rehetra misy ifandraisany amin'ny teknolojia vaovao. Mpampiasa Linux hatramin'ny taona 1997. Oh, ary marary Ubuntu tanteraka (tsy te-ho sitrana), izay manantena ny hampianatra anao ny zava-drehetra momba ity rafitra fiasa ity.